ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
(6များအတွက်စုစုပေါင်း ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ကိုနှိပ်ပါ
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8114 ကြေးဝါဘောလုံး နှင့်အတူ Bibcocks ရေပိုက် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: 1/2 €€, 3/4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: 1. Bibcock ဆက်သွယ်မှုကို hose ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. ရေ (NPT) ချည်အထီးဝင်ပေါက် ACC / GB / T က 12716 ။ 4....
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် ART.8702 ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? 2â€ရန်...
စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုအတုကြေးဝါ Swing စစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်
ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် ART.8704 ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? €4âသို့
အတုကြေးဝါ Y ကို - ပုံစံစစ်အောင်
ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် ART.8705 ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? 2â€ရန်
သံမဏိ filter နှင့်အတူကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်
သံမဏိ filter နှင့်အတူကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် ART.8708 ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် သံမဏိနှင့်အတူ သံမဏိစစ်ထုတ်စက် အရွယ်အစား: 1 / မှ 2a € ?? To4â€ ?? နည်းပညာဆိုင်ရာစံ - ကိုယ်ခန္ဓာ တောင်းဆိုချက်အရ CW614N, CuZn39Pb3, CW617N, CuZn40Pb2,...
ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် ကြေးဝါစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင် ကြေးဝါစစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင် ကြေးဝါကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင် ကြေးဝါလက်အိတ်အဆို့ရှင် Tee အထီးစစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင် အတုကြေးဝါစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင် ကြေးဝါဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်